သတ္တမအကြိမ်မြောက် Developer Conference (Developer Conference 2017) – Internet Journal |
သတ္တမအကြိမ်မြောက် Developer Conference (Developer Conference 2017)
Nov 14, 2017Comments Off on သတ္တမအကြိမ်မြောက် Developer Conference (Developer Conference 2017)0389
ကျင်းပမည့်နေ့ – နိုဝင်ဘာလ ၁၈ ရက် နှင့် ၁၉ ရက်
အချိန် – နံနက် ၉း၃၀ မှ ညနေ ၅ နာရီ
နေရာ – Myanmar Information & Communication Technology Park (MICT Park)
ဝက်ဘ်ဆိုက် – www.devconmyanmar.org
မြန်မာနိုင်ငံ အိုင်စီတီကဏ္ဍ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် Software Developer အရည်အသွေး မြင့်မားလာစေရန် ရည်ရွယ်ပြီး ၂၀၁၁ ခုနှစ်မှ စတင်ကာနှစ်စဉ် ကျင်းပပြုလုပ်လာခဲ့တဲ့ Developer Conference ကို (၇) ကြိမ်မြောက်အဖြစ် ယခုနှစ်တွင်လည်း ကျင်းပတော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါအခမ်းအနားကို ရန်ကုန်မြို့မှာ နှစ်စဉ်ကျင်းပလာခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံ ကွန်ပျူတာ ပညာရှင်များအသင်း (MCPA) မှ ကြီးမှူးကျင်းပ သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ Developer Conference မှာ ရန်ကုန်မြို့နှင့် မြန်မာပြည်တစ်ဝှမ်းရှိ ကွန်ပျုတာ၊ ဆော့ဖ်ဝဲ၊ Networking နှင့် အိုင်တီနည်းပညာ လုပ်ငန်းများမှ ပညာရှင်များ၊ လုပ်ငန်းရှင်များ၊ ကွန်ပျူတာနှင့် အိုင်တီကျောင်း များ၊ တက္ကသိုလ်များမှ ပါမောက္ခ၊ ဆရာ၊ ဆရာမများ၊ ကျောင်းသားကျောင်းသူများ၊ နိုင်ငံရပ်ခြားရောက် မြန်မာပညာရှင်များ၊ နိုင်ငံခြား
တက္ကသိုလ်နှင့် လုပ်ငန်းများမှ ပညာရှင်များ နှစ်စဉ်စုဝေးကာ အသိပညာ၊ အတတ်ပညာများနှင့်၊ နောက်ဆုံးပေါ် နည်းစနစ်များ၊ နည်းပညာများကို တင်ပြ၊ ဆွေးနွေးဖလှယ်ကြသော တစ်ခုတည်းသော စုဝေးဆွေးနွေးပွဲဖြစ်၍ နည်းပညာ သစ်များကို တွေ့မြင်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Developer Conference ဆိုတာဘာလဲ
Developer Conference ဆိုသည်မှာ မိမိပြေလိုသော အကြောင်းအရာများကို လွတ်လွတ်လပ်လပ် ဆွေးနွေးနိုင်တဲ့ သဘော ဖြစ်ပါတယ်။ Developer Conference တွေကို နိုင်ငံတကာ မှာကျင်းပရာ အများစုက Google Developer Conference, Web Developer Conference, Blackberry Developer Conference, Android Developer Conference အစရှိသဖြင့် ဆွေးနွေး ကျင်းပတဲ့ခေါင်းစဉ်အပေါ် လိုက်ပြီး ခေါ်ဆိုခြင်းဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ Developer Conference မှာ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ ကဲ့သို့မဟုတ်ဘဲ မိမိဆွေးနွေးလိုသမျှကို လွတ်လွတ်လပ်လပ် ဆွေးနွေးနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အလုပ်ရုံ ဆွေးနွေးပွဲမှာ မိမိပြောပြလိုတဲ့ အကြောင်းအရာကို ပြောဆိုဆွေးနွေးခြင်းဖြစ် ပြီး Developer Conference တွင် ပြင်ပမှလာရောက် နားထောင်သူတွေကလည်း ဝင်ရောက်ဆွေးနွေးနိုင်မှာ ဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။
Developer Conference ကို Developer များ၊ နည်းပညာနှင့် ဆက်နွယ်နေသူများသာ တက်ရောက်ရမည်ဟု သတ်မှတ်ထားခြင်းမရှိဘဲ နည်းပညာကို စိတ်ပါဝင်စားသူတိုင်း မည်သူမဆို တက်ရောက်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ တက်ရောက်ရန်အတွက် အသက်အရွယ်ကိုလည်း ကန့်သတ်မထားပေ။ Developer Conference မှာ ပါဝင်ဆွေးနွေး ဟောပြောမယ့်သူတွေရဲ့ အချိန်စာရင်းများကို သတ်မှတ်နေရာမှာ ကြေညာပေးထားမှာဖြစ်ပြီး ယင်းကိုကြည့်ရှုကာ မိမိတက်ရောက်လိုသော အချိန်တွင် တက်ရောက်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပြည်တွင်းနည်းပညာ နယ်ပယ်အသီးသီးမှ ပညာရှင်များ၊ ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်သူများ၊ ပြည်တွင်း
ကုမ္ပဏီကြီးများတွင် ၀င်ရောက်လုပ်ကိုင်နေသူများ၊ နိုင်ငံခြားသား ပညာရှင်များ အစရှိသည်တို့မှ ဟောပြောဆွေးနွေး ပေးသွား မှာဖြစ်ပါတယ်။ Developer များအတွက် အဓိက ကျင်းပပေးခြင်းဖြစ်၍ Developer အဖြစ် လုပ်ကိုင်နေသူများ၊ Developer လုပ်ငန်းနှင့်
ပတ်သက်၍ လေ့လာနေသူများ၊ Developer ဖြစ်ချင်သူများ အတက်ရောက်သင့်ဆုံး အခမ်းအနားဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ Developer Conference ကို ကန့်သတ်ချက်မရှိ မည်သူမဆို တက်ရောက်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ Developerများ၊ Programmer များ၊ Soft-ware Programmer များ၊ Software Engineer များ၊ System Integrator များ၊ IT Consultant များနှင့် ဆောဖ်ဝဲဖွံ့ ဖြိုးတိုးတက်ရေး အတွက် ဆောင်ရွက်နေသူများ အစရှိသည်ဖြင့် မည်သူမဆို တက်ရောက်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
ပြောင်းလဲလာသောခေတ်၊ ပွင့်လင်းမြင်သာသော နိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေးဈေးကွက်နှင့် တိုးတက်လာသော နည်းပညာများကို ကမ္ဘာနှင့်လိုက်မီရန်၊ ပညာရှင်များမှ ၎င်းတို့စမ်းသပ်ထားသော နည်းသစ်များ၊ သိရှိထားသော ဗဟုသုတများ၊ ဆောင်ရန်
ရှောင်ရန်များကို နှစ်ရက်ကြာ တင်ပြဆွေးနွေး ဖလှယ်ကြမည်ဖြစ်ရာ လက်လွှတ်မခံသင့်တဲ့ ပွဲတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
Developer Conference 2017 မှာ ဘာတွေဆွေးနွေးမှာလဲ
Developer Conference 2017 မှာ Upcoming Trends အဖြစ် (Data Science, Blockchain, Quantum Computing, IoT,AI,AR,VR), Current Technologies များထဲမှ (Cloud, Virtualization, Docker, XaaS, Apps, Bots), Experience/ Case
Studies, Security, Software development and Languages, Business side of Software,UI/UX နဲ့ Other Software related topics စတဲ့ နည်းပညာတွေကို ဈေးကွက်ထဲမှာ လက်တွေ့လုပ်ကိုင်နေကြတဲ့ ပညာရှင်တွေကနေ ဆွေးနွေးဟောပြောသွားမှာဖြစ်
တက်ရောက်လို သူတွေအနေနဲ့ မှတ်ပုံတင်ပြီး လက်မှတ်ဝယ် ယူရမှာဖြစ်ပါတယ်။ လက်ရှိတွင် လက်မှတ်များကို စတင်ဝယ်ယူနိုင်ပြီဖြစ်ပြီး Developer Conference Yangon 2017 အတွက် တက်ရောက်ခွင့် မှတ်ပုံတင်ကြေးကို တစ်သောင်းကျပ် သတ်မှတ်ထားတယ်လို့ သိရပါတယ်။ ပွဲနေ့မတိုင်ခင်လာ ရောက်ဝယ်ယူသူတွေအနေနဲ့ ငါးထောင်ကျပ်ဖြစ်ပါ တယ်။ ပွဲနေ့မှာ လာရောက် ဝယ်ယူတဲ့ သူတွေအနေနဲ့ကတော့ Full Charge ဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။
1/ MCPA Office – Building (9), Ground Floor, MICT Park, Hlaing Campus
2/ MCC Computer Center – Theingyi Zay, C Ward, Third Floor, Pabedan Township
3/ GUSTO College – No. 289 (A), Pyay Road, Sanchaung Township
4/ KMD Center (1) – No. 331, Pyay Street, Myanegone, Sanchaung Township
5/ KMD Center (2) – Building No. (30/31), Insein Road, Kamaryut Township
6/ Micro Computer – No. 143, Ground Floor, 46 Street, Upper Block, Botahtaung Township
7/ Kanaung Hub – Building 14, 5th Floor,
MICT Park, Hlaing Township စတဲ့နေရာတွေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Developer Conference Yangon 2017 ကို လာရောက်တဲ့သူတွေအတွက် သိရှိလိုတဲ့ အကြောင်းအရာတွေကို အလွယ်တကူ သိရှိနိုင်စေဖို့ ပွဲကျင်းပရာနေရာအနီးမှာ လမ်းညွှန်ထားရှိပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ သတ်မှတ်နေရာ ဆိုင်းဘုတ်မှာလည်း ဟောပြောဆွေးနွေး
မယ့်သူရဲ့ ဆွေးနွေးမယ့် အကြောင်းအရာ၊ အချိန်အစရှိတဲ့ အချက်တွေကိုလည်း ကြည့်ရှုနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Developer Conference 2017 အကြောင်း ကြိုတင်လေ့လာနိုင်မည့် ဝက်ဘ်ဆိုက်
Developer Conference ကျင်းပတဲ့အချိန်တိုင်း အခမ်းအနားနဲ့ပတ်သက်ပြီး လေ့လာသိရှိနိုင်စေဖို့အတွက် ဝက်ဘ်ဆိုက် လွှင့်တင်ထားလေ့ ရှိသကဲ့သို့ ယခုနှစ်အတွက်ကိုလည်း ဝက်ဘ်ဆိုက်မှာ လွှင့်တင်ထားပြီး ဖြစ်ပါတယ်။ Developer Conference ရဲ့
ပင်မဝက်ဘ်ဆိုက် လိပ်စာကတော့ www.devconmyanmar.org ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဝက်ဘ်ဆိုက်မှာ Developer Conference 2017 ရန်ကုန်နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ နောက်ဆုံးရ အသေးစိတ် သတင်းအချက်အလက်တွေကို လေ့လာသိရှိနိုင်ဖို့ ဖော်ပြပေးထားပါတယ်။ အသေးစိတ် အချက်အလက်တွေကိုတော့ MCPA ရုံး ဖုန်း ၀၁ ၆၅၂၂၇၆၊ ၀၉ ၇၃၀၈၈၃၃၀၊ အီးမေးလ် [email protected] သို့ ဆက်သွယ်စုံစမ်းနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Devcon ၏ အချက်အလက် အချို့
Developer Conference 2017 ဖြစ်မြောက်ရေးအတွက် ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပမှ သေး၊ ငယ်၊ ကြီးလတ် နည်းပညာ ကုမ္ပဏီများစွာတို့မှ ပံ့ပိုးကူညီထားပြီး Media Partner များအဖြစ် Internet Journal, Netguide တို့မှ ပံ့ပိုးကူညီပေးထားပါတယ်။
Previous Postဂြိုဟ်တုချန်နယ် ငှားရမ်းခနှုန်းထား `ဝန်ကြီးဌာနနှင့် ကုမ္ပဏီကွာခြားမည်
Next PostLive TV